Yusuf Garaad: War jiraaba Cakaaruu iman
Ceel Buur oo ka mid ah Galguduud
Mudug iyo Galguduud oo shirkii lagu dhisi lahaa aanuu weli furmin ayaa waxaa socda isxodxodasho, isbahaysi, isiibsasho iyo ballanqaadyo inta badan been ah oo ku saabsan tartanka Madaxtinnimada Dowlad Goboleedka la filayo in ay ka soo bixi doonto, shirka la filayo in la qaban doono usbuucan aakhirkiisa.
Murashixinta sida xalaasha ah xilkaas isugu soo taagay oo soo banbaxay waxaa ka mid ah Madax khibrad iyo aqoon leh oo xilkaas lagu aammini karo. Waxaa ka mid ah ugu yaraan laba murashax oo amniga u leh khibrad durugsan, meelo bandanna looga ammaano.
Laakiin hadalhaynta dadku waxay ku ag meereysaneysaa laba nin oo midkoodna aanuu si rasmi ah ugu dhawaaqin in uu murashax yahay. Labaduba hore ayay xilal heer Wasiir ama ka badan ah ay u soo qabteen. Labaduba waxay hadda ku magacaaban yihiin xilal waaweyn. Midkoodna xilka uu ku magacaaban yahay iskama casilin. Madaxdooduna kama dalbin in ay is casilaan maaddaama ay doorasho u socdaan, haddana ay iyada keliya ka shaqeeyaan. Weli ishaafalataysi ayaa lagu jiraa.
Sababta iyaga oo aan is shaacin ay dad badani u hadal hayaan maxay tahay ayaan is weydiiyay?Qiyaasteyda, oo khaldanaan karta, waxay tahay laba middood. In jacayl iyo hilow loo qabo oo ay dadka ku kasabdeen guulo ay ka soo hooyeen xilalkii Qaran ee ay hore u hayn jireen. Ama in hadalhayntu ay salka ku hayso feejignaan laga qabo waxqabadxumi iyo dhaqankooda siyaasadeed ee looga bartay oo la isu tilmaamayo.
Usbuucyo gudahood ayaa war jiraaba Cadaado imaan, marka aan aragno ninkii ay ergooyinku "doortaan".
Sida dadka iyo dalka Soomaaliya u roon Ilaaheey ha ka dhigo.
Posted by Yusuf Garaad at 11:12:00